RSS = Avereno ny sendika tsotra? Avoahy ny Resume Online | Martech Zone
Alarobia, Desambra 20, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Iray amin'ireo fiasa mahafinaritra an'ny Technorati dia toy ny motera fikarohana. Misy fomba roa hanaovana an'io, ny iray dia mitady amin'ny teny, ny iray amin'ny tag. Tiako ny mampiasa tag satria afaka tena mikendry ny fitaovana tadiavinao izy.
Ohatra amin'ny karoka:
Ohatra amin'ny tag:
Ny valiny amin'ny fikarohana tag dia matanjaka be. Misy fomba maro amin'ny fandavahana ny votoaty hahitana izay ilainao.
Ny safidy amin'ny fampiasana tag dia tsy misy farany… raha ny marina, nanararaotra aho androany ary nijery ilay tag hoe "resume" sy "mcse".
Dia izay! Izy io dia mamokatra hira roa:
Nojereko avy eo ny “asa” sy ny “msce”:
Oay! Misy vitsivitsy ihany koa ny hitsoka amin'izany! Tsy azoko antoka ianareo, fa heveriko ho fitaovana tonga lafatra sy mety ampiasaina ity RSS! Amin'ny alàlan'ny olona mandefa ny tohiny amin'ny bilaoginy manokana ary avy eo mandefa toerana ao amin'ny bilaogin'izy ireo ny mpampiasa…. Technorati dia azo ampiasaina mora hanadiavana sy hamantarana asa ho an'ny mpampiasa sy ny mpampiasa ho an'ny asa!
RSS = Avereno ny sendika tsotra?
May 3, 2007 amin'ny 6: 39 AM
Efa misy io.
May 3, 2007 amin'ny 11: 26 AM
Nanome ohatra vitsivitsy ao amin'ny ResumeBay aho